Best Forex Trading Trading Platform uye System | Forex Software - FXCC
Iwe unotarisira kuti mumwe wevatungamiri ve ECN-STP vatengesi vakupei zvitsva, zvigadziriswa, mapuratifomu ekutengeserana
uye paFXCC hatitomboodembi. Vatengi vedu vanogona kuwana mahwindo eFX pane zvese zvinoshandiswa; mafoni, mahwendefa, makombiyuta,
PC uye kuburikidza nekushandisa maseraji ari kure. Shamwari yedu yakasarudzwa yekuwana mari kune MetaQuotes Software Corporation, iyo
vadziki nevatadzi venyika inozivikanwa, kukunda mubairo uye inonyanya kuzivikanwa FX trading platform kune, MetaTrader 4.
MetaTrader 4 inongedzo yezvikwata zvakagadzirwa ne MetaQuotes Software Corporation. MetaQuotes Software Corp. ikambani yekufambisa software yakatanga kutengesa mu 2000. Kubva pakatanga, kambani yakagadzira mukurumbira usina kufanira uye yakagadzikana kubudirira kukuru mukukudziridza uye kubudisa ruzivo rwezvitsva, zvinyorwa zvekutengeserana mapurisa, mazano uye zvigadzirisheni mumutambo wekutengeserana kwemisika.
Nhamba dzekuoma kunzwisisa uye vatengesi vekugadzirisa zvinogona kukura kuti zvikwanise maitiro avo ekutengeserana nekuda kuziva, kuburikidza nekushandisa huwandu hwakazara hwezvinhu uye zviwanikwa zviripo kuMetaTrader platforms, zvinoramba zvisina unchalleng munhizha. Zvisinei, kune vatengesi vatsva uye vasina ruzivo, mapuratifomu anoshamisa: kushandiswa kwevashandi, nyore uye zvakananga kushandisa.
Kunyangwe iwe uri chikamu chekutengeserana chiri kutarisa kuti uwedzere mikana yako uye mukana wekubudirira, kana kuti uzvifungidzire iwe iwe unyanzvi wenguva yakazara, uyo anoda kushandisa: sevha yega yega yega kana kushandisa mashandisirwo emagetsi ekutengesa kuwana misika pamagetsi ekupenya, MetaTrader ine mhinduro yakarurama kwauri. Uyezve, kuburikidza neFXCC iwe uri kutarisa kuburikidza nekugadziriswa pasina wevatengesi davi rinopindira, nepo nekuwana dziva revanopa mari kuburikidza nenhare ye ECN yatinopa. Kuvimbisa kuti interbank mazwi uye anopararira iwe unogamuchira ndeyechokwadi pamusika kuratidza mamiriro ezvinhu zvino.
FXCC inopa mahwendefa anotevera: MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 multi terminal uye MAM (multi account manager).
Edza mapurisa edu!
NeVaMetTrader 4 vatengesi vari kuwana imwe yevakakurumbira zvikuru forex kutengesa mapurisa munyika. Rakavimbika, rakasimba uye rakagadzikana, chikwata chine zvinhu zvose zvinodiwa zvokutengesa zvishandiso uye zvigadziriswa kuitira kuti vatengesi vaite: kuongorora nekuongorora, kupinda uye kubuda maitiro uye kushandisa sangano rekutsvaga mazvinotengesa software, Expert Advisors (EAs). Kana uri kutarisa kuti uende mberi kwevanhu vazhinji uye maEA anotengeserana, ipapo MetaTrader yakagadzirisawo purogiramu yacho purogiramu - MQL4, zvinoita kuti vatengesi varongedze maojobhi avo ezvokutengeserana.
Download Now Dzidza zvimwe User Guide
Inopa huwandu hwakawandisa hwezvigadzirwa zve Forex trading.
MetaTrader 4 Mobile App inonyatsogadziridzwa uye yakakwana yekutengeserana nzvimbo yeIndaneti uye iPhone inowanzoshandisa mafoni. Iri shanduro yakasiyana-siyana inobvumira vatengesi kusarudza kubva kumazana emakambani ekukweretesa achikwikwidzana nebhizimisi revatengesi. Purogiramu yacho inopa zvinhu zvose vatengesi vanoda kuti vakwanise kufambisa Forex trading. Yakapindirwa kupinda papuratifomu ndeye: yakakwana yemirairo, nhoroondo yekutengeserana, maratirano akasiyana-siyana, kuongororwa kwekwenyanzvi uye kusarudzwa kwakawanda kwemafoni esimba anotsigirwa.
Vatengesi vanoshandisa MetaTrader 4 Mobile App vanofarira mabasa ane simba ekutengesa Forex chero nguva uye chero kupi zvako panyika. Rimwe raibhurari yekuongorora uye yekutsvaga mabhizimusi inowanikwa kune zvigadzirwa zvefoni.
Nhamba yekutengesa neMetaTrader 4 zvinhu
Kunyatsogadzirisa pamusoro pekambani yebhizimisi
Kutengeswa kubva kupi zvako 24 / 5
Zvose zvirongwa zvekuronga uye kuuraya nzira
3 marudzi emaroto: mabhairi, zvigadziko zveJapan uye mutsara wakaputsika
9 nguva yemazuva: kubva paminiti imwe kusvika pamwedzi umwe
30 yezvinonyanya kuzivikanwa zviratidzo
23 kuongorora zvinhu
Nhau yemari yemari
Free mobile chat uye email
GadzirisaGoogle Play Available pamusoroApp Store Dzidza zvimwe Android User Guide IOS User Guide
Yakatangwa mu2006, iyo MetaTrader 4 MultiTerminal iyi ikozvino inoremekedzwa uye inoremekedzwa chikamu cheMetaTrader 4 Online Trading Platform. MultiTerminal yakagadzirirwa kutarisana panguva imwechete yezvinyorwa zvakawanda. Iyi inzvimbo yakakosha zvikuru uye nharaunda yevaya vanochengeta mari, kana avo vanotarisira mabhizimisi ezvo uye nevatengesi vanoshanda neakawanda maakaiti panguva imwe chete.
Iyo MT4 MultiTerminal inobudirira inobatanidza mashizha anotungamirira emakambani anosanganisira kutengeserana kunobudirira kwezvinyorwa zvakawanda uye nehuwandu hwekushandisa. Purogiramu yepurogiramu yakafanana neyoMetaTrader 4 Client Terminal. Icho chinhu chakanaka chaizvo uye chinonzwisisika, kuti chero mutengesi anowanzoshandisa kushandisa MetaTrader 4 Client Terminal, anogona nyore nyore kuzivana nokukurumidza.
MetaFX inopa mutengesi broker software application inozivikanwa se MAM (Multi Account Manager) nokuda kwevashandi vanoita zvekutengesa mari yekambani yakachengetedzwa MAM inobvumira kushanda nemhando ipi neipi yemakero akachengetedzeka, kushandisa sophisticated allocations methods, kushanda na Expert Advisors nezvimwe zvakawanda. Zvimwe zvezvikamu uye zvikomborero zvinosanganisira:
Server Side Side plugin inokurudzira kushanda pakarepo
Client Side Software Chikumbiro chekugadzirisa zvirongwa zvemashamba
Mari dzisina kukwana dzebhizimisi
STP pane master account yekurayira kwehuwandu, pamwe nekugovera zvishoma kune zvinyorwa zviduku
"Boka Rokutora" kuurawa kubva kuMutongi wekugadzirisa
Kusarura pedyo nemirairo nekutonga kweAtekete
Zvose SL, TP & Pending order functionality
Inobvumira Expert Advisor (EA) kutengeserana kwekambani dzakachengetwa kubva kune vateereri
Inobvumira zviratidzo zveMitambo zvekutengeserana zvinotengeswa paMT platform (yakasarudzwa modhura)
Yese Sub Account inowanikwa kuti ibudise mhinduro
Kurarama kurongeka kwekutarisa mukati meMAM kusanganisira P & L